Land for Sale in Dubai - Real Estate Real Estate by Provident
Land for sale tany Dubai
Ny tany amidy any Dubai dia natolotry ny mpampiasa manerantany. Dubai dia mifantoka amin'ny fitomboan'ny trano fandraisam-bahiny satria nahazo ny biraony ho fampiantranoana Expo 2020. Ny tetikasa momba ny tetikasa dia mipoitra avy amin'ireo mpandraharaha manerana an'i Dubai, izay nahatonga ny mpampiasa ho liana amin'ny fividianana tany.
Ireo mpikirakira dia mitsinjo ny tany noho ny fitakiana goavana amin'ny trano fandraisam-bahiny satria i Dubai dia andrasana hahasarika mpitsidika 20 Million. Ny Dubai Tecom Business Park dia hanana toerana vaovao 40 ho an'ny hotely dia hampitombo ny safidy ho an'ny mpitsidika.
Ny tatitra avy amin'ny Standard & Poors (S & P) dia manome soso-kevitra fa ny fampiroboroboana ny banky Dubai dia aorianan'ny fanarenana an'i Real Estate. Ny sampan-draharaham-paritany tany Dubai (DLD) dia nandrisika ny mpandrindra tsirairay mba hamita ireo tetikasa efa nomanina izay nanamboatra ny lalana ho an'ireo dihibe vaovao nividianana na fandefasana an'i Dubai.
Ireo orinasam-pandraharahana goavana manerana an'i Dubai dia manangona ny mpanjifany amin'ny fotoana mety amin'ny toeram-ponenana ao Dubai. Izahay ao amin'ny Provident Real Estate dia manome tolotra matihanina ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ireo mpandraharahan'ny fananan-tany nomena anay ary manome fiovàna mivezivezy amin'ny dingana fampiasam-bola.
Hahita ireo efamira azo amidy sy hividy ambany.